Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo.
Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy.
Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?
Tao amin'ny lalina no niantsoako Anao,Jehovah ô.
Tompo ô, henoy ny feoko;
Aoka ny sofinao hihaino tsara ny feon'ny fifonako.
Indro efa noesoriko teny an-tananao,ny kapoaka mahajenjina,ny kapoakan'ny fahatezerako;tsy hisotro izany intsony ianao,izao sisa izao.
Nahoana no mitanondrika hianao, ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko hianao? Manantenà an' Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho, Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro.
Salamo 42 : 11
Aoka tsy ho amin' ny fitiavambola ny toe-tsainareo, fa mianina amin' izay anananareo; fa hoy Izy: Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.
Jehovah efa nandre ny fangatahako;
Jehovah no handray ny fivavahako.
Ho menatra sy hangovitra ny fahavaloko;
Hihodina izy ka ho menatra tampoka.
Indro, Izaho efa hanao zava-baovao,
Koa ankehitriny dia efa miposaka izany;
tsy hahalala izany va hianareo?
Eny, any an-efitra no hanaovako lalana
Ary any amin'ny tany lao no hasiako ony.
Mba jereo koa hoe ny site-nay ê:
ity ny site natokana ihany koa ho an'ny malagasy :
- tsy ho ela fandaharana vonjeo ny fianakaviana
(video sy audio)